Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Spasmodic torticollis လည်ပင်းနာရောဂါတမျိုး
Spasmodic torticollis လည်ပင်းနာရောဂါတမျိုး
Mon, Jul 2, 2012 at 5:00 PM
I am suffering from neck problem since 2011 February. That time I was working in (့). The symptom was stiff neck. I went to see the family doctor and took an x-ray. According the x-ray result she said disc slipping and then she referred me to physio-therapy centre. I went there and took the neck traction treatment for 25 times. After that my neck was very painful and I could not get straight my neck and to tilt to the left side. I resigned job and came back to Mandalay. In Mandalay I met with orthopedic surgeon and took MRI. Then he gave the same traditional traction treatment. After one month I was still very painful. Then I went to seeaneurologist who said it was not the bone degeneration, but nerve degeneration. Then I came to know my disease's name is Cervical Torticollis. She said it was difficult to cure and take Botox injection to relieve pain. So I went down to Yangon and took the Botox injection fromaneurologist. I took3injections from him altogether 400 units. But I didn’t get the improvement. He said in Myanmar there is no EMG device. I had to give up. But I tried to contact with Thai private hospital. I went there and took the Botox injection with EMG guidance. I gotalittle bit improvement after3weeks. I went to Thailand again and took another 210 units of Botox injection. After 17 days the spasm was relievedalittle bit but after 25 days it became painful again and could not walk.
အလွန်နာကျင်တဲ့ လည်ပင်းမှာဖြစ်တဲ့ နာတာရှည် အာရုံကြောရောဂါဖြစ်တယ်။ ရှားတယ်။ ကြွက်သားအုပ်စု မတူတာတွေက အတူတူအလုပ်လုပ်လာကြတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အကြောင်း ရှာမရတာ များတယ်။ တချို့မှာတော့ တခြားရောဂါကနေ ဆက်ဖြစ်တယ်။ လည်ပင်းလှည့်ရတာ ခက်လာတဲ့အဆင့် ရောက်ရင် Cervical dystonia ခေါ်တယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာ လူ ၁ဝဝဝ မှာ ၃ ယောက်မက ဖြစ်ကြတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ စာရင်းမရလို့ နည်းတယ် ထင်ရတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ပိုများတယ်။ အသက် ၄၁ နှစ်မှာ အဖြစ်အများဆုံးလို့ တွေ့ရတယ်။
နာတာတူပေမဲ့ Symptoms လက္ခဏာတွေ မတူကြပါ။
• Chin toward shoulder မေးက ပခုံးဆီ၊ (အများဆုံး)၊
• Ear toward shoulder နားက ပခုံးဆီ၊
• Chin straight up မေးက အထက်မော့၊
• Chin straight down မေးက အောက်ငုံ့။
• တချို့မှာ လည်ပင်းနာတာက ပခုံးဆီအထိနာတယ်။ တချို့မှာ ခေါင်းပါကိုက်ဆယ်။ တချို့မှာ အားအင်ကုန်ပြီး မောပန်းမယ်။ ကြာတော့ စိတ်ဓါတ်ကျလာတတ်တယ်။
ဖြစ်ကာစ သိပ်မဆိုးသေးဘူး။ လည်ပင်းကို လှည့်ရတာက ဆတ်ကနည်း Jerky movements ခေါ်တယ်။ သက်သာတဲ့ အနေအထားမှာ အကြာကြီး ထားချင်လာတယ်။ ကြာတော့ ဆိုးဆိုးလာတယ်။ Involuntary spasm လည်ပင်း ကြွက်သားတွေက အလိုလို တွန့်-ဆွဲလာကြလို့ဖြစ်တယ်။ လမ်းလျှောက်ချိန်၊ စိတ်ဖိအား များချိန်တွေမှာ ပိုဆိုးတယ်။ ၇၅% က လည်ပင်းနာတယ်၊ ၃၃-၄ဝ% က ခေါင်းတုန်တယ်။
• Blood or urine tests သွေး-ဆီးစစ်ရင် toxins တွေ့မယ်။
• Magnetic resonance imaging (MRI) ရိုက်ရတယ်။ Tumors အကျိတ်ရှိရင် Stroke ရှိရင်မြင်ရမယ်။
• Electromyography (EMG) နည်းက ကြွက်သားရဲ့ လျှပ်စစ်စီးတာကို သိစေတယ်။
လုံးဝပျောက်ဘို့ ကုသနည်း မတွေ့သေးပါ။ သူ့ဖါသူ သက်သာ သွားတာလဲ ရှိတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အသေအခြာ မသိသလို ဘာလို့ သက်သာလဲဆိုတာလဲ မသိပါ။ Treatment ကုသနည်းတွေ -
1. Botulinum toxin type A ဆေးထိုးတာက ပဌမဦးစားပေးကုသနည်းဖြစ်တယ်။
2. Oral medications စားဆေး၊
3. Deep brain stimulation ခွဲစိတ်ပြီး ကရိယာထည့်ထားနည်း၊
4. Selective surgical denervation of nerves ခွဲစိတ်ပြီး ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောဖြတ်ပေးနည်း။
(၁) Botulinum toxin နည်းကို အများဆုံးလုပ်ကြရတယ်။
Botulinum toxin type A က အသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်။ Presynaptic axon of the motor end plate အာရုံကြောကနေ Acetylcholine (အက်စီတိုင်ကိုလင်း) ဓါတ် ထွက်လာမှာကို တားဆီးပေးတယ်။ ဒါကြောင့် Antagonist muscle ကြွက်သားတမျိုးကို လေဖြတ်သလို လုပ်ပေးလိုက်တို့ ကျန်တဲ့ Agonist muscle ကြွက်သားကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်စေနိုင်တယ်။ ဆေးတခါထိုးထားရင် ၁၂-၁၆ ပါတ်အထိ သက်သာနေမယ်။ ဆေးအမျိုးအမျိုးရှိပေမဲ့ BOTOX နဲ့ Dysport ကိုသာ FDA က အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ ၄-၁၇% သောလူနာတွေက Botulinum toxin type A နဲ့ မရဖြစ်လာလို့ Botulinum toxin type B (Myobloc) ကို သုံးရတယ်။ အာခေါင်ခြောက်တာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ဆေးထိုးတဲ့နေရာနာ ၂၈%၊ အစာမျိုရခက် ၁၁-၄ဝ%၊ အာခေါင်ခြောက် ၃၃%၊ အားယုတ် ၁၇%၊ ဆေးထိုးကြွက်သား အာနည်း ၅၆%။
(၂) Oral medications စားဆေးတွေ
အရင်တုံးက Dopamine ဆေးကိုသုံးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် မသုံးတော့ဘူး။
1. Anticholinergic agents လူနာ ၅ဝ% သုံးတယ်။
2. Clonazepam လူနာ ၂၁% သုံးတယ်။
3. Benzodiazepines လူနာ ၁၃% သုံးတယ်။
4. Baclofen လူနာ ၁၁% သုံးတယ်။
ဖြစ်စလူနာတွေကို ဆေးအဆ နည်းပေးလို့ရတယ်။ နောက်ပိုင်း များပေးရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အာခေါင်ခြောက်၊ အသိတရားချို့ယွင်း၊ အိပ်ချင်၊ မျက်စိထဲ နှစ်ရုပ်မြင်၊ မျက်စိရေတိမ်၊ ဆီးအသွားရခက်တာတွေ ဖြစ်တယ်။
• Parkinson's drugs ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Trihexyphenidyl နဲ့ Benztropine (Cogentin) ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ Botulinum toxin injections ဆေးထိုးတာနဲ့တွဲတာ ကောင်းတယ်။
• Muscle relaxants ကြွက်သားပျော့ဆေးလဲသုံးတယ်။ နဲနဲတော့ အထောက်အကူရစေတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ သတိထားရမယ်။ အိပ်ချင်၊ ထိန်းမရ၊ အသိတရားနည်းတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Diazepam (Valium, Diastat), Lorazepam (Ativan), clonazepam (Klonopin) နဲ့ baclofen (Lioresal) ဆေးတွေကို သုံးတယ်။
• Pain medications အနာသက်သာဆေးတွေကိုလဲ သောက်နိုင်တယ်။
(၃) Deep brain stimulation ဦးနှောက်အတွင်ပိုင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးနည်း
Deep brain stimulation ဦးခေါင်းခွဲမှာ အပေါက်လေးဖေါက်ပြီး၊ ဦးနှောက်ထဲကို လျှပ်စစ်စီးနိုင်တဲ့ ဝိုင်ယာလေးတခု ထည့်ရတယ်။ ရင်ပတ် အရေပြားအောက်မှာ ဓါတ်ခဲပါ ကရိယာလေးနဲ့ ဆက်ပေးထားမယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းထဲက Globus pallidus internus နဲ့ Subthalamic nucleus နေရာတွေကို လုပ်ရတယ်။
• Biofeedback သတိပေးကရိယာ တပ်ထားရတယ်။ တခုခုလွဲရင် သတိပေးမယ်။ ပြင်လိုက်ရတယ်။
• Stretching and Strengthening exercises လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရမယ်။ ခေါင်းအနေအထား မှန်ဘို့ဖြစ်တယ်။
• Neck brace (ကော်လာ) အမြဲလိုလို တပ်ထားပါ။
• Stress management techniques စိတ်ဖိအားလျှော့နည်းတွေ လုပ်ပါ။